KORINTA EYGA: MIA THE AMERICAN BULLY 8 TODDOBAAD JIR - EEYAHA
Korinta Eyga: Mia the American Bully 8 toddobaad jir
Maalin nolosha kamid ah oo leh Mia the American Bully (Bully Pit) eey. Toddobaadka labaad ee Mia - 8 toddobaad jir, 10 rodol, 9 1/2 inji ka soo bilow dhulka ilaa barta ugu sarreysa ee garbaha (qallalaya).
eygu wuxuu ku dhalaa carrab dheer
8 toddobaad jir (2 bilood)
Dabeecada Mia waa mid aad u fiican. Wax badan oo iyada ku saabsan ayaa i xasuusinaya habka Spike the Bulldog ahaa. Si dhakhso leh ayey uga jawaabtaa oo waxay rabtaa inay ka farxiso hoggaamiyeyaasheeda xirmada. Waxay jeceshahay dadka. Haddii aad soo qaadatid waxay ku siin doontaa dhunkasho eey oo dhan garkaaga oo dhan. Iyadu waa mid aad u jecel oo waxay jeceshahay inay qoorta u gasho qoorta intaad hayso. Way caqli badan tahay jeedal ahaan. Waxyaabaha si dhakhso leh ayey u soo qabataa. Dhab ahaantii mid ka mid ah eeyaha caqliga badan ee aan lahaa. Iyadu waa dabeecad, goofy iyo majaajilo. Waxay jeceshahay inay cagteeda hawada kor ugu qaaddo sida Bruno u sameyso, sidaa darteed iyada oo baraya amarka 'ku siiso baw' way fududahay.
Mia hadda kuma sii ordeyso isku dayga inay la wareegto. Mar dambe ma guuxayso markii aad dhibto. In kastoo, iyadu weli waxay leedahay xoogaa xariiq adag oo madax adag markay rabto inay wax qabato. Khibradeyda waxaan ku ogaaday in eeyaha alfa ay u muuqdaan eyda caqliga badan ee qashinka ku jira. Mia waxay u baahan tahay xeerar iyo qaab-dhismeed. Caqli badan ayey ku filan tahay inay ogaato waxay u baahan doonto inay sameyso haddii ay ku hareeraysan yihiin dad aadan bixinaynin waxa ay xirmada u baahan tahay. Mia waa dhalad dabiici ah kuna dhalatay alfa waana inaan sii wadnaa wixii aan ku sameyn jirnay eeyaha oo dhan si aan nidaamka u ilaalino. Kudhaqanka dabeecadda eey mar uun maahan tababar gaaban laakiin waa qaab nololeed.
Mia waa wax yar oo madax adag. Tusaale ahaan, markii baakadu u socoto albaabka subaxa si ay suuliga u aado way la socon doontaa ilaa ay ka gaarto meesha ay dadka oo dhami tagayaan, qabowga. Markaa waxay ku istaagi doontaa raadkeeda, wayna jeesan doontaa waxayna u orodsan doontaa jihada kale. Waa inaan xarig dul dhigaa si ay iyada kaligeed u baxdo. Iyadu way isku dayi doontaa oo waxay ku ordi doontaa xadhigga waana inaan istaagaa iyada oo u oggolaanaya inay ka saarto nidaamkeeda illaa ay ka degayso.
Madax adaygeedu sidoo kale wuxuu muujiyaa markaan u kaxeeyo si aan hawlaha beeraha u qabto subax iyo habeenba. Waxay ku jirtaa xadhig. Markii aan ka baxeyno aag ku sii jeedda mid kale, haddii ay u maleyneyso inaysan dhammeynin urinta hareeraha, way diidi doontaa inay timaado oo ay u jiidato aagga ay rabto inay ahaato. Inta badan hoos ugu dhaadhaca heerkeeda oo sameeya wicitaanada eeyaha iyo codadka dhunkashada waxay ka dhigeysaa inay si dhakhso leh ugala baxdo diiradda ay saareyso khasnadda ay urisay laakiin waligeed ma helin inay wax cunto, laakiin inta badan maahan sidaas oo waa inaan halkaas taagnaadaa oo aan sugaa waxay ogaatay inaysan awood u lahayn inay u kacdo meeshii ay rabto. Waa wadadaydii ama maya. Ma joogi karno bakhaarka maalinta oo dhan mana ka tagi karo halkaas. Waa inay ila timaaddaa. Gaar ahaan tan iyo marar ka badan oo aan ahayn waxay dooneysaa inay cunto saxarada qof kale oo iyadu uun urisay. Oh haa, awoodda cuntada.
Mia waa cunto dhiirigelin badan. Cuntada dhabta ahi mararka qaar way shaqaysaa haddii ay dhadhan fiican leedahay anigana waan istcimaalaa markaan awoodo, laakiin had iyo jeer gacanta kuma hayo marka ay go'aansato inaysan dhageysan doonin. Fikradeeda, saxaro waa cunto waana ka dhadhan fiican tahay daaweynta eeyga. Waxaan diidayaa inaan qaado saxaro si aan u soo jiito iyada. Waan qaadi karayay oo aan qaadi lahaa, laakiin hadaanan ka yeelin inay masaafada kaligeed socoto taasi waxba ma bari doonto waxaana suura gal ah inay dhibaatada ka sii darto mustaqbalka madaama ay waxbarto maahan inay ku socoto socodka. Wali wey da 'yartahay waana wax iska caadi ah eeygu in uusan imaanin marka loo yeero ama uu ka baxo albaabka markii loo sheego, laakiin waxaan arkaa dhib dheeri ah oo madax adeyg ah oo aan eeydayda kale midkoodna ku dhicin. Xaragadaan yar ayaa i siinaysa orod lacagtayda ah oo hubaal ah.
Mia waxay soo kacdaa 5:00 subaxnimo 'Yip! Aan ka soo baxo qafiskeyga, waa inaan saxaraa.
Mia waxaa laga qaadayaa mid ka mid ah caruurta iyaduna iyadaa wax qabata.
Mia dib ayaa loogu celiyey sanduuqeeda.
Daqiiqado yar kadib: 'Yip! Waan gaajooday waxaanan doonayaa inaan ciyaaro!
Hawlgalkeeda ayaa i toosiya waxaanan u kacaa inaan kaxeeyo iyada oo aan aado musqusha, anigoon ogeyn inay banaanka joogto.
Waa qabow oo Mia ayaa i eegaysa aniga oo taahya.
Aniga: 'Oh hoogeey, iska kaadi! Halkan waa qabow! Waxaan tilmaamay cawska.
Mia wey gunuunacdaa oo si kadis ah ayey ugu socotaa cawska iyo fadhiidka. Markii ay dhammeyso waxaan dib ugu laabanaa guriga.
Mia waxay fuulaysaa tallaabada guriga loo galayo iyo foostooyinka sariiraha eyga. 'Waa Waqti Ciyaar !!!!'
Amie ayaa igu leh, 'Waad ogtahay inaan iyada uun u soo saaray dheriga oo ay saxarootay oo saxarootay.'
Oh, xoqan yar. Waxaan qiyaasayaa inaan quraacdeeda heli doono.
Mia samir ayey igu sugeysaa si aan u diyaariyo cuntadeeda. Waxay taagan tahay meel u dhow halkii ay ka ahaan lahayd Bruno ama Spencer. Waxay baraneysaa jadwalka. Kadib quraacoodii hore Bruno iyo Spencer sariirta ayey dib ugu laabtaan. Weligood goor hore ma kacaan.
Mia waxaa loo qaadaa si ay u kaadi saarto quraacda ka dib. Way fadhiisataa isla marka ay cawska gaarto ka dib waxaan dib ugu laabannaa guriga.
shih tzu pekingese qas puppy
Waxay foostooyin u aadaysaa sariiraha eeyga. 'Tooso, Bruno iyo Spencer! Ma garaneysaa saacadda ay tahay? Waa waqtigii ciyaarta!
Waxay qaadataa xoogaa dadaal laakiin iyadu waxay ugu dambeyntii kor u qaadaysaa fartiinadii hore oo dhammaantood way ciyaaraan. Hal mar ayey u soo dhaqaaqdaa xagga albaabka hore, way fadhiisataa oo ku dhaygagtaa. Cajiib! Waxay codsaneysaa inay baxdo! Waxaan furaa albaabka oo waan la baxayaa iyada. Waxay toos ugu tagtaa cawska iyo xaarka iyo saxarooda. Gabar wanaagsan, Mia!
Dib ugu noqoshada gudaha waxay kaheshaa walaalaheed mar labaad inay ciyaaraan, laakiin ciyaarta ayaa gaabis ah.
Waa 7:00 subaxnimo oo Mia waa duugowday. Ugu dambayntii hurdo ayey ku noqotay.
Mia kuma saxaro sanduuqdeeda sidii Bruno iyo Spencer u sameeyeen markii ay eey ahaayeen. Taasi waxay ka dhigeysaa jabinta guriga mid aad u fudud. Waa calaamad muujinaysa in iyada breeder lahaa habayn ku habboon inta lagu guda jiro whelp .
Waxaan u kaxeystay Mia si aan u qabto howlaha beeraha habeen kasta. Waxay sifiican ugu shaqeysaa inaysan dhib u geysan kuwa kale ee wax naqdiya. Waxay sidoo kale baraneysaa inaysan isku dayin inay cunaan cuntadooda. Way fiiqday intaan dibadda ku maqnayn. Waan soo laabanay oo Mia ayaan ku riday sanduuqeeda habeenka. Shan daqiiqo ka dib markii aan jiifsaday si aan u seexdo, Mia waxay ku dhex dhacday santuuqdeeda. Hmmmm, ka waran haddii ay tahay inay saxaradu saxarooto? Waxay aad ugu fiicnayd inay ii sheegto inay tahay inay musqusha aado inta ay ku jirto sanduuqeeda. Waligeed may gelin gudaha qafiskeeda ka hor. Waxaan jeclaan lahaa inaan nabad noqdo intaan ka xumahay. Hoos ayaan u degay oo waxaan ugu aaday dhanka caarada. Way foorarsatay. Wicitaan wanaagsan si loo saaro iyada. Waqti ayaan siiyay si aan u hubiyo in ay dhammaatay. Markii aan dib ugu soo noqonay gudaha waxay u orodday midigta Bruno iyo Spencer waxayna isku dayday inay la seexato sariirahooda iyaga. Oh maya, maahan. Waxaad geli laheyd nooc kasta oo dhibaato ah oo lacag la’aan ah.
Waxaan ku riday sanduuqdeeda iyadoo leh xoogsheegasho oo dib ugu noqday sariirta. Shan daqiiqo ka dib ayay bilowday inay soo saarto. Wiilyahow ma bilaabayno tan hadda, miyaynu nahay? Suuliga ayey durba tagtay waana hubaa inay hada rabto inay la seexato walaalaha waaweyn. Goynta ayaa sii socota.
Waxaan dib ugu soo laabtay sagxadda hoose, waxaan eegay qafiskeeda oo halkaas ayay fadhiisatay iyadoo indhahayga ku haysa indhaha yaryar ee yaryar. 'Yip!' Midig ayaan u tilmaamay iyada oo ku idhi, 'Maya!'
Way cabaadaysay oo si kedis ah ayey u jiifsatay oo seexatay. Markaan leeyahay taah waxaan ula jeedaa taah. Gabi ahaanba may ahayn ciil. Waxay ahayd cabaad sidii ilmo yar oo dhahaya oowwwww oo leh calaacal. Waxay ahayd buuq soo baxay. Haddii aanan sifiican u garaneynin waxaan ku qosli lahaa cod dheer isla horteeda. Qabo hogaamiyaha baakadka adoo dareemaya xoogaa dheer. U kac jaranjarada iyo hareeraha geeska qolka jiifka ka dibna qosolka ka daa. Oh gosh waa quruxsan tahay.
Guri jabinta Kaliya Xaalad
Hadda xitaa ma aqaano haddii taasi sax tahay. Banaanka ayuu roob ka da’ayaa dadkuna way soo galayaan ama ka baxayaan. Laakiin waad iska fariisaneysaa meesha ku xigta si aad sawir u hesho haddiiba ay dhacdo.
Guri-jabis Ey Seexanaya
Markay ahayd 2:50 am Mia waxay soo gashay sanduuqeeda. Hoos ayaan u degay oo aan furay santukheeda. Mia ma istaagin. Waan wacay. 'Kaalay, Mia.' Mia wali ma istaagin. Hmmmmm. Waan soo qabtay oo banaanka ayaan u kaxeeyay. Horaan sariirta uga soo baxay bal aan eegno haddii ay tahay inaad tagto ka hor intaanan iska indhatirin qalliinnada badan. Mia way fiiqday oo saxarootay. Marka waa inay tagtaa. Waxay ahayd mid aad u hurudda si ay u kacdo.
Mia ayaa hada cuntey qadadeeda, cunada labada ey ee kale ma helaan. Waxaan xiray albaabka jikada ka baxayay inta Mia ay wax cunaysay. Isla markii ay dhamaysayba waxay u dhaqaaqday xagga albaabka xidhan oo fadhiisatay. 'Maya maya maya maya,' Waxaan ku iri si deggan, laakiin si dhakhso leh. Mia dib ayey u istaagtay iyada oo aan runta saxaroon. Waxaan ula cararay bannaanka meeshii ay ku fadhiisatay meeshii saxda ahayd ee aan iyada hoos ugu xardhay. Gabar fiican.
Labadii maalmood ee ugu horreeyey Mia waxay ku qayliyeen qofka cuntada u diyaarinaya. Taasi waa dhaqan xumo. Waan iska shubnay mar kasta oo ay qayliso. Si fiican ayey ugu jawaabtay iyadoo fadhiisata oo na eegaysa. Hadda iyadu ma sii ciyeyso. Hadda way fadhiisataa oo si deggan ayey u sugtaa, sida walaalaheed ka weyn oo kale.
Xusuusin Akhlaaqda Waqtiga Quudinta
Mia waxay ahayd naag duur joog ah subaxdii. Waxay ku sii dhawaaneysay iyada oo ku dhejineysa alaabta ay ku ciyaaraan. Waxaan bilaabay diyaarinta quraacda eeyaha. Mia oo fadhida ayaa si lama filaan ah kor ugu qaadday cagteeda yar oo ay dhulka ka kacday oo taahay. 'Waxaan rabaa cuntadayda!'
'Haye!' Si fiican ayaan u eegay iyada. Labada ey ee kale xitaa ma libiqsana. Waxay ogaayeen inaanan iyaga lahadlayn. Mia way ogayd inaan la hadlayo. Way is dejisay oo dulqaad ayay ku sugtay ilaa aan ka dhammeeyay. Gabar fiican. Hadda taasi way ka sii eg tahay.
Mia waxay maqashay raadiyaha si lama filaan ah oo cod weyn ku yimid waxayna ku orday kursiga gadaashiisa. Qof kastaa wuu ka taxaddarray inuu siiyo wax dareen ah illaa ay maskaxiyan ka gudubto. Qiyaastii daqiiqad ayay ka fiirisay geeska oo ay soo baxday. Haddii aan siin lahayn wax feejignaan ah intay cabsanayso, waxay u qaadan lahayd taas annaga oo dhahayna 'gabar wanaagsan, haa taasi waa cabsi, taas ka baqo.' Taabadalkeed, waxaan u ogolaanay inay ka shaqeyso. Ma dooneyno inaan abuurno eey farshaxan ah.
Waxaan u ogolaaday Mia inay gadaal ka raacaan eeyaha waaweyn marka uu jiro qof kale oo bini aadam ah oo halkaas ilaalinaya.
Marka aysan jirin qof daawan kara, Mia waxay raacdaa dabaqa dhinaca hore ee rakaabka. Waxaan u sheegayaa inay sii joogto. Baaburkeennii ugu horreeyay ee baabuur raaca xagga hore ayay ka ilmeysay aniguna waan ka aamusay. Markasta oo ay jiifsan lahayd. Haddaan siiyo jacayl ama hadal macaan iyada oo aan hubin, waxay u sheegaysaa inaan ku raacsanahay dareenkeeda. Way ka sii fiicnaanaysaa safarka.
Waxaan hayey Mia oo waxay ii xoqaysay garka. Kadib waxay bilowday inay qaniinto eey. 'Yip!' Mia si deg deg ah ayey madaxa u saartay garabkeyga.
Sara: 'Maxay ahayd taasi?'
Aniga: 'Oh, taasi aniga ayay ahayd. Waa eey loogu talagalay 'ouch, taas ayaa xanuun leh.' '
Sara: 'Waa maxay?!!'
Aniga: Way fahantay macnaheeda. Bal eeg, way istaagtay.
Sara: (ogeysiinta qoyska intiisa kale) 'Hooyo waxay bilaabi doontaa inay u wareegto sidii eey oo kale!'
Qoyska: 'Waa maxay??!!'
Khasnadaha la qaboojiyey
Mia, maxaad ugu jeceshahay ushaas in badan? Wow, fiiri waad socotaa. Oh sug, waa maxay taasi? Miyaan arkaa xoogaa casaan ah? Uma maleynayo inay tahay ul ka dib oo dhan. Mia, taas i sii.
Maashaa allaah! Waa jiir barafoobay !!! Ma heli kartid taas. Waan kaxaystay waxayna bilawday inay sanka ku mashquuliso mid kale.
Waa maxay waxan aad calalinaysaan? Oh waali, waxay umuuqataa wax dhintay. Dhigida kamarada. Deg deg ah! Yikes, iyadu way liqdaa! U helay! Waxaan ka soo saaray afkeeda anigoo ku jira waqtiga. Waxay u dhexeysay hungurigeeda. Ewwww, waxay ahayd wada qoyan iyo cows! Waa jiir kale! Caqli! Waan xamili karaa inaan ku hayo dabadooda ama xitaa taabto mid barafaysan, laakiin markaan ku qasbanaado inaan taabto diirimaad, jiir jilicsan oo jiir jireed ... hadda waxaan helayaa jeebbada heebie! Sideed taas ku cuni kartaa ?! Ma aqaan waxa ka sii daran, oo ah inaan jiirkaaga ka soo bixiyo jiir jilicsan, diirran, qoyan, jiir dhintay ama xaqiiqda ah inay kuwo badan oo ka mid ahi daaradda ku hareeraysan yihiin. Waa inaan xasuustaa inaan ka boodo dhunkashada eeyaha in yar.
Hadda xitaa ma aqaano waxaani waa waxa aad ku ruugaysay. Haye, adigu halkaas, jooji inaad mid kale eegto! Waan ka daalay inaan wax ka soo bixiyo afkaaga!
Mia had iyo jeer waxay urisaa waxyaabo aysan aheyn inay lahaato. Hadda waa maxay? Waxaad wax ku calalinaysaa waxanan ku siinin wax daaweyn ah. Fur oo ii oggolow inaan arko waxaas. Cayayaan ur. Runtii? Yuck.
Waqtiga Ciyaarta Kadib
Kadib socodkeenii baakada iyo waqtigii eeyaha, oo aan ku qaatay qorista boggan, waxaan fadhiistay banaanka dhowr saacadood anigoo kormeeraya ciyaarta eeyaha. Waxay ahayd heer sare oo 55 ah. Aad u diiran marka la barbar dhigo usbuucii la soo dhaafay. Eeyadu waxay u baahdeen waqtigan isku xirnaanta. Mia aad ayey uyartahay inay kaligeed banaanka ku ahaato beertaan weyn waxaanan rabaa inaan hubiyo in eeyaha oo dhami ay dhaqmeen, taas oo ay sameeyeen marka laga reebo isku dayga inay cunaan laba jiir oo dhintay iyo shay kale oo aan la garanayn
Waxaan u socday ardaaga oo waxaan u yeeray eeyaha oo dhan. Bruno iyo Spencer ayaa soo orday. Mia way hakatay, iyadoo fadhiday jaranjarada hore ka dibna xaggayga u dhaqaaqday. Dib ayaan u noqday oo socodkaygii waan iska sii watay. Gadaal ayaan eegay si aan u arko inay wali daba socoto iyo inkale. Dhinac ilaa dhinac u eegay, maan arag iyada. Markaasaan soo xusuustay: intaanan si lama filaan ah jihooyinka u beddelan toos u eeg xagga hoose. Haa Halkaas ayay joogtaa.
Spencer wuxuu kudhawaa baraf xoogaa, halka Mia uu kudhaco Spencer.
pinscher Ghadafi iyo isku dhafka yorkie
Ha u oggolaan wejigaas aan waxba galabsan inuu ku khiyaaneeyo. Ilkahaas yaryar waxay uun ku calalinayeen sumaddaas buluugga ah!
Mia waxay jeceshahay inay ku hoos ciyaarto duurka. Waxay ku garaacdaa laamaha waxayna qoddaa carrada. Waxay u soo orday mid ka mid ah duurka weyn ee ardaaga waxayna ku jirtay waqti weyn oo qaniinyo ah laamo, qodid iyo ruxitaanka. Bruno iyo Spencer ayaa daawanayay iyada.
'Haye Bruno, maxaad ugu malaynaysaa inay halkaas ku sii socoto?'
'Gee, ma ogi. Waa inay heshay xoogaa bililiqo ah, sida jiir dhintay ama ka sii wanaagsan, mid nool. Waxaa laga yaabaa inaan hubino '
Walaalihii waaweynaa ayaa u soo dhaqaaqay dhanka baadiyaha oo ay isku tuurayaan hoostiisa. 'Spence, wax ur ah miyaad urisaa?'
adhijir Jarmal ah oo lagu qasay feeryahan
'Maya, laakiin sii dhuuqso agagaarka, halkan waxbaa jira.'
'Ma garanayo. Waxba urin maayo oo san wanaagsan ayaa i saaray. Waxaan u maleynayaa in canuggu kaliya yahay nuts. '
'Waxay noqon kartaa, noqon kartaa.'
Oh, waxaad noqon doontaa god qoda, miyaad tahay? Fiiri adigu tag. Waxaad i xasuusineysaa doofaar.
Sug, maxaad iska cuntay? Dhulku waa ka fudud yahay halkaas. Waxay u egtahay dhoobo. Muxuu yahay taa? Waxaan u adeegsaday pinecone si aan ugu qodo wasakhda khafiifka ah. Yikes! Taasi waa saxarka bisadda! Bisaduhu waxay saxaroodaan inay aasaan adiguna waad urisay oo qoday oo cunay! Tani ma waxay noqon kartaa maxaad u jeceshahay duurka? Bisaduhu ma saxaraayaan duurka dhexdiisa?
Qalabkan dhuuban waa inuu ku joojiyaa. Aan ka baxno ka hor intaadan qodin bililiqo badan.
Ey ubax xun
Waxaan u soo qaatay Mia xoogaa cunnooyin cunug ah. Halkii aan ka urin lahaa eeyga, waxaan ka ursaday madaxeeda. Waa maxay? Waxaan eegay sanduuqgeeda. Nadiifi. Waxaan eegay sariiraha eyga. Iyagu nadiif ayey ahaayeen, sidoo kale. Sidee taasi ku dhici kartaa? Ma rogtay? Kadib way i garaacday. Bruno iyo Spencer had iyo jeer waxay ku fiiqmaan dhinaca duurka waxayna ku socotaa meel kasta oo baadiyaha ah. Waa inay soo martay hoosta qaybtii baadiyaha ahayd ee ay ka xoqeen. Caqli !!
Toddobaadkii ugu horreeyay ee lala yeesho Mia wuxuu ahaa mid daal badan. Hadda oo aan dhammaanteen la degaynno waxyaabo caadi ah ayaa sii fududaanaysa.
Eeyadu waxay ku maqnaayeen daaradda. Waxaan dhamaanteen bilownay inaan dib u laabano. Qof walba marka laga reebo Mia, taasi waa. Waxaan soo gaarnay balbalada.
'Mia, Mia, Mia ....' Mia marwalba oo aan dhahno magaceeda ayay madaxeeda xiisayso. Waxay ahayd mid aad u qurux badan. 'Mia, Mia. Kaalay, Mia. Kaliya waxay fadhiisatay buurta, iyadoo madaxa hoos u foorareysa markasta oo aan sheegno magaceeda.
Gudaha ayaan ugu soo dhaqaaqay oo waxaan helay bacda daweynta waxaanan dib ugu laabtay balbalada. Bacda waan ruxay. 'Mia, Mia. Kaalay, Mia. Mia ayaa madaxeeda xijisatay oo orod ku soo gashay dhankayaga. 'Cunto !! Waan ka heli doonaa qaar ka mid ah taas!
Kaba Weyn Ka Weyn Boot
Midkee iska leh?
Hector ee Pug eey
Mia waxay la kulantay Hector 4-bilood jir Pug eey ah markii ugu horeysay. Kahor intaysan ciyaarin waxay isbartaan iyagoo midba midka kale gadaashiisa gadaal uraya. Mia waa gabar wanaagsan waxayna u oggoshahay in la urin karo. Eygu wuxuu heli karaa macluumaad badan oo ku saabsan eey kale si fudud isagoo urinaya.
'Runtii ma waxaad ka cuntay quraacda?'
'Haa, taasi waa waxa hooyaday i quudiso.'
'Haye, Hector! Ma rabtaa inaad ciyaarto?
Labadooduba muddo dheer ayey ku sii socdeen. Waxay noqon doontaa hurdo yar kadib.
Kadib markay Mia la ciyaartay Hector way daashay. Waxay si xawli ah ugu huruday sariirta eyga ee ku xigta Spencer. Waxaan go’aansaday inaan ordo oo aan dhaqo dhaqso ah. Xaqiiqdii way jiifan doontaa 15 daqiiqo, sax? Markii aan hoos ugu soo laabtay waa tan aan helay. Rasaas, waxay ahayd inaan iyada ku rido sanduuqdeeda. Degdeg oo soo hel shukumaanno xaashi ah iyo buufinta sunta lagu buufiyo ka hor inta aysan u dhaadhicin dillaaca dhulka.
I caawi! Waan Qabsaday!
Mia waxay la seexanaysay Spencer. Spencer wuxuu ku kala fidsanaa hurdadiisa. 'Caawin, caawi! Lugahaaga ayaan ku dhegay! Toos, Spencer! Waan xayiray! Mia waxay u wareegtay sidii doofaarka oo kale isagoo isku dayaya inuu kaco iyadoo Spencer uu seexday iyadoo lugaha uu ku kala fidsan yahay dusheeda. Mia ayaa ka shaqeysay in cabbaar ah ugu dambeyntiina wey is xoreysay. Waxay hagaajisay booskeedii oo ay hurdo ku laabatay.
Shilka Gawaarida Koowaad
5: 00-kii subaxnimo ayaan ka soo toosay hurdo dheer oo aan seexday. Waan toosay oo Mia banaanka ayaan u saaray. Waxay ahayd inay si xun u socoto way cabaadaysay. Waxaan ku maqlayay deg-degga codkeeda yar sidaa darteed waxaan ku qaaday iyada oo ka baxaysa albaabka. Waan dhigay iyada oo isla markiiba saxarootay. Markii aan ku soo noqonnay ayaan ogaaday in ay ka qodatay dahaadhkeeda sanduuqa. Waa la laalaabay. Ah-oh. Waxaan dareemay safka. Qoyan. Aniga ayaa hadda kaadida gacanta ku haya.
Waxay ahayd inaan ku tuuro safka meesha lagu maydho, buufiyo oo aan nadiifiyo salka santuuqa si aan uga takhaluso urta oo aan u helo shukumaanno iyo buste aan ugu isticmaalo gogosha cusub.
Ma aqaano haddii ay saxday uun ka hor intaanan hoos u dhigin jaranjarada ama haddii ay ku sameysay saqbadhkii habeennimo markii aanan ku soo toosin biyaheeda. Eeyaha yaryar waxay hanan karaan kaadiheysta iyo caloosha muddo dheer. Aad ayey uyartahay waxayna jirtaa 8 wiig markay jirto, markay tahay inay aado malaha waqti badan oo lagaga baxo iyada kahor intaanay tagin oo keliya.
Kadib markii aan Mia dib ugu celiyey sanduuqeedii waxaan dib ugu noqday sariirta. Waxaan maqlay iyada oohin. Haddana? Runtii? Waxaan dib ugu noqday sagxadda oo waxaan furey qafiskii si aan u arko haddii ay tahay inay musqusha aado. Ma aysan istaagin. Dhulka ayaan salaaxay. Wali ma aysan istaagin. Sariirta ayaan ku noqday. Waxaan maqlay markale iyada oo cabaadaya. Hagaag, markan waan soo bixinayaa waxaanan siinayaa hal fursad oo ay ku baxdo ka hor intaanan u sheegin inay aamusto. Banaanka ayaan u kaxeeyay. Mar labaad ayay saxarootay. Saxaro badan Allaa mahad leh waxaan siiyay fursad kale. Waan soo galnay oo waxaan ku soo celiyey sanduuq keeda iyadoo ul ulleh.
Little Mia, waad daalan tahay, laakiin waa u qalantaa.
Shilka Gawaarida Labaad
Laba maalmood ka dib 12:30 am ayaan sariirta ka soo booday. Miyaan riyooday waxaan maqlay waxqabad ama run miyaa? Ma aanan ogeyn. Markii aan gaadhay sanduuqa Mia ayay jiiftay. Waxaan furay sanduuqa. Ma inaad dibadda u baxdaa? Dhulka ayaan salaaxay. Way i eegtay uun. Malaha waan ku riyooday Waan xidhay santuuqa oo dib ayaan ugu noqday sariirta.
Markay ahayd 1:00 am ee markan ayaan maqlay si hubaal ah. 'Yip!' Waan orday oo waxaan furay sanduuqii. Mia ayaa ka baxday. Wax baan uray. Weyn Waxaan ka helay banaanka meeshii ay saxarootay oo saxarootay. Dib ayaan ugu soo laabtay oo waxaan hubiyey safka shaashadda. Waxay ahayd qoyan. Ku dadaal! Waxaan ku tuuray maydhashada waxaanan ku nadiifiyey sanduuqii tuwaallo oo waxaan gashaday buste sidii gogosha. Dib ayaan u geliyay Mia oo sariirta ayaan aaday.
shaybaarka madoow iyo iskuxirka newfoundland
Daqiiqado yar kadib, 'Yip!' Punk yar. Hoos ayaan u degay, anigoo jaakadayda ka soo xiraya santuuqa oo ku dhejinaya markaan u sii socdo santuuqa. Mia ayaa fadhiday aniga oo i fiirinaya. Waxaan furay sanduuqa. 'Ma inaad weecdaa?' Dhulka ayaan salaaxay. Kaalay. Mia ayaa ku dhawaaqday baroor yar oo ay dib u jiifsatay. Fiican Waad ku mahadsantahay inaad sariirta iga soo kacday mar labaad.
Isla marka aan jiifsado 'yip!' Taasi waa intaas, waad baxaysaa. Iyada oo jaakaddayda gacanta ku haysa markii aan sariirtii dhaafey, ayaan Mia ka soo saaray sanduuqdeedii. Isla markii ay hawadii qabow ku dhacday ay ku oorisay. Maya waxaad aadeysaa barta saxarada cawska. Waan dhigay iyada. Waxay samaysay gunuunuc cadho waxayna si deg deg ah uga soo baxday cawska markii ay i jeedisay oo ay fadhiisatay wadada. 'Haddii aad soo baxdo waxaad u baxaysaa inaad kaadi yeelato! Wee wee, MiMi ,. ' sidii aan ku tilmaamay cawska. Mia waxay sameysay caradaas mar labaad. Waxay u dhawaqday sidii iyadoo ila doodaysa. Waxay u dhaqaaqday albaabka hore. Waan lasocday iyada. Markii aan u imid sherkadeeda waxaan dib u habeeyay gogosha sariirta lacala haddii ay aad ugu buurnaato iyada. Waxay gashay santuuqeedii oo hoos u dhacday, iyadoo aad ugu faraxsan inay soo noqoto. Wax saas ah may jirin ilaa subaxda.
Hadda waxaan soo marnay laba shil oo sanduuq ah oo labaduba waxay wada galeen isla safka sanduuqa. Ma aqaano waxa ku saabsan waxaas. Waan u cadeeyay, hadana wali waxaa jira nabar yar oo kuyaala oo ay Mia sankeeda ku leedahay horaantii. Taasi ma dhici kartaa? Safka weli mala u urin karaa iyada kaadi ahaan? Mise waa iska siman tahay in saxaro laga helo? Mise shilkan labaad ee isla safku wuxuu ahaa shil uun? Waxaan ka fekerayay sidii aan u heli lahaa safka labaad si aan ugu beddelo sida tan kale loo dhaqo, maxaa yeelay way ka sahlan yihiin ka laalaabidda tuwaallada iyo bustayaasha, laakiin hadda ma hubo sidaas inay tahay fikrad wanaagsan.
Muunada saxarada Mia ayaa soo noqotay iyadoo taban, taasoo la micno ah inaysan lahayn wax dirxi ah ama dulin. Yay Mia!
Markay 8 toddobaad jir tahay Mia waxay baranaysaa in qolka qoysku ka baxsan yahay xadka. Waxaa jira laba iridood oo laga galo qolka, jikada iyo qolka fadhiga. Albaabbo ma leh, haddana Mia waxay baranaysaa in aan loo oggolayn inay u gudubto qolkaas. Xitaa Katie xitaa iyada oo leh mashruuckeeda buug-gacmeedka dhammaan sagxadda dhulka ayaa isku dayaysa Mia qolka. Lahaanshaha xudduudo waxay muhiim u tahay dhammaan eeyaha.
Maanta waxay ahayd 45 digrii iyo qorax. Waqti badan ayaan ku qaadan jirnay kaliya qorraxda marka Mia waxay baran doontaa in bannaanka uu yahay meel fiican oo lagu jiro. Iyada oo roobabkii oo dhan ay ka soo dhacayeen cirka iyo cimilada qabow tan iyo markii ay qaadatay Mia, iyada oo la barayo inay iyada kaligeed ka baxdo albaabkeeda ayaa dhib noqotay. Waxaan isticmaali jiray cuntada, si kastaba ha noqotee, marka cimiladu xun tahay Mia waxay dooran doontaa qalalan oo diirimaad ka badan cuntada qabow iyo / ama qoyan. 'Mia, ma jiraan wax afkaaga ka soo laalaada?'
Korinta Eyga: Spencer the Pitbull
tilmaamaha jarmalka jarmalka oo dhan bunni
sawirrada mastiffs puppy puppy
qashinka isbaanishka iyo isku darka shitzu
buuryo yaryar mastiff ah oo iib ah
shih tzu iyo yorkie eey
labrador Springer ingiriisiga qas spaniel